Kônstantino I - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Konstantino I)
Kônstantino I na Kônstantino Lehibe dia emperora romana tao amin'ny Empira Romana tamin'ny taona 306 hatramin'ny taona 337, teraka ny 27 Febroary 274 tao Naisosy ao Mesia (i Niš ao Serbia ankehitriny)ary maty ny 23 Mey 337. Izy no emperora voalohany niova ho kristiana. Izy koa no nanorina an'i Kônstantinôpôlisy (i Istanbul ankehitriny), izay nataony renivohitry ny fanjakany ka nitoetra ho renivohitry ny Empira bizantina hatramin'ny taona 1453.
I Kônstantio Klôro no rainy. I Helena no reniny. Ny vadiny dia Minervina (taona 293 - 307) avy eo i Faosta (taona 307 - 327). Ny zanany tamin'i Minervina dia i Krispo, ny tamin'i Faosta dia i Kônstantina, i Helena, i Konstantino II, i Konstanta ary i Konstantio II. Ny rahalahiny sy ny rahavaviny dia i Flavio Dalmatio, i Flavio Jolio Kônstantio, i Flavia Jolia Kônstantia, i Eotrôpia ary i Anastasia.
Ny emperora Kônstantino I dia nanao fanavaozana teo amin'ny politika ara-tafika sy ara-pivavahana ary ara-toekarena, izany no nahafahany namondrona ho eo ambany fahefany irery ilay Empira rômana efa malemy sady nizarazara. Noreseny i Maksentio (latina: Marcus Aurelius Valerius Maxentius) tamin'ny taona 312 tamin'ny ady tao Milvio, sy i Likinio (latina: Flavius Galerius Valerius Licinianus Licinius) tamin'ny taona 324 tamin'ny ady tao Andrinôpôlisy.
Nanomboka ny fahalalahan'ny fivavahan'ny tsirairay tamin'ny androny, ka tapitra hatreo ny fanenjehana ny Kristiana tamin'ny alalan'ny Didin'i Milano tamin'ny taona 313. Natsahany ny tsy fifanarahana teo amin'ny Fiangonan'ny Atsinanana tamin'ny nampanaovany ny Konsily tao Nikea tamin'ny taona 325, ka izany no niantombohan'ny fahefany tamin'ny raharaham-pivavahana, izany no atao hoe kaisaropapisma na sezaropapisma. Ireo fanavaozana sy fanitsiana nataony ireo dia nanampy ny firoborobon'ny fivavahana kristiana, izay lasa fivavahany taty aoriana, ka iheverana azy ho isan'ny olo-masina ao amin'ny Fiangonana ôrtôdôksa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kônstantino_I&oldid=993442"
Voaova farany tamin'ny 8 Jiona 2020 amin'ny 11:27 ity pejy ity.